Abasebenzi be-Belarusian bakholelwa ukuba i-acum yezoqoqosho kunye nokunxibelelana kubaluleke kakhulu kwimfundo - uHienaLouca
Abasebenzi be-Belarusian bakholelwa ukuba i-acumen yezoshishino kunye noonxibelelwano zibaluleke ngaphezu kwemfundo
Ukuze babe nobutyebi, ngokuhambelana nabamashishini amancinci naphakathi, kukho enye into efunekayo i-praddpremalntsy, i-acum ye-business, i-communications. Inhlonipho encinane - imfundo, italente, ukuhlonipha.
Iziko leZiko loPhuculo noLawulo linike iziphumo zophando lwamashishini amancinci naphakathi. Yintoni eye yatshintshi emva kwenkathazo, ziziphi iinjongo zokubaluleka kwishishini.
Abaxhasayo bokuguqulwa kweemarike baye baba ngabancedisi bemimiselo yombuso (78% vs. 17%) - esi sisigqibo esifikelelwe ngabaphandi be-IPM. Kwiminyaka yakutshanje, amashishini amancinci naphakathi avelise ngokukhawuleza kunokuba uqoqosho luphela. Iimali ziye zithengwa ngakumbi kubameli bamashishini amancinci naphakathi.
Nangona kunjalo, unyaka wesibili ngokulandelelana, kuye kwaba nokunciphisa ukwaneliseka kwinqanaba lemfundo, imfundo yabasebenzi bayo. Abasebenzi baba yintlupheko.
Ngelo xesha, abaphandi be-IPM, ukuhlalutya iziphumo zophando lwabameli be-405 bamashishini amancinci naphakathi, beza kwizigqibo ezithile ezingathandekiyo. Umbuzo wabuza: "Ziziphi iimpawu ezifunekayo ukuze zizityebi eBelarus?"
Eyokuqala - i-pradpremalnasts, intambo yezohwebo (71, 6%).
Okwesibini - ukufumaneka kwezixhobo eziyimfuneko (52,3%).
Ngomsebenzi wesithathu osebenzayo (51,6%).
Iyesine ingqondo (45,2).
Ngesihlanu - inhlanhla, inhlanhla (38,6).
Kwaye kuphela i-26,6% yabaphendulayo bakholelwa ukuba imfundo iyimfuneko ukuphumeza ubutyebi.
Into efunekayo yile talente, ukuhlonipha, nokuba ngaphantsi.
I-6,1% yabaphendulayo bakholelwa: ukuze ube nobutyebi, kufuneka uziphatha okubi.
Dasledytsa uDaria Urban. Photo Paul Berasneva
"Imilinganiselo isiseko apho yonke imisebenzi isekelwe khona. Sithembele kwiziphi ixabiso esinalo kuqala, sikhetha i vector yomsebenzi wethu.
Siyabona ukuba ishishini likhetha ukunxibelelana okulungileyo. Ukongezelela koko, ukugqithisa ngakumbi koqoqosho lwezo shishino, abantu banokukhetha ukweenxibelelwano. Ukuphucula imeko yobume bezoshishino, abantu abashishini abancinane bakhetha ubudlelwane - bakhetha ukuhlonipha, imfundo, ingqondo.
Abantu abaphumelele ngakumbi, xa behamba ngakumbi, banokukhetha ngakumbi izinto zokuziphatha, "kusho umphandi uDaria Urban.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-312, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
EGomel, umphathi wabanjwa ngenxa yokunxila, ngubani owayephethe ukulwa nenkohlakalo
Ngaba iindawo ezithambileyo zeNtshona zixhasa ukunyanzelisa eBelarus?
UZuckerberg wangena kwiintlobo eziphakamileyo ezintathu zehlabathi
"I-Soviet Photoshop." Indlela yokutshintsha ukudubula kumaxesha eSoviet
Musa ukoyika iingqondo zengqondo! Ingqondo yakho yengqondo njengedokotela wamazinyo okanye umatshini
I-Onuka, i-Monatik kunye nabanye abadumileyo baseUkraine bathatha inxaxheba ekutshweni kwe "Starry Alphabet"
Inkwenkwezi yeengqungquthela "I-Tudors" uJonathan Reese-Myers uthetha ngeengxaki zakhe ngotywala
Post Previous:"ULasashenka ubuqili, njengo-Mussolini. Ulufundisi kaPutin, "Uhlalutyo lukaNovodvorkaya, olungakhange lulahlekelwe lifanelekileyo
Okulandelayo Post:UVladimir Berezhkov waba ngumlawuli we-Ice Hockey Federation